Labo bayitholile kwamaSoviet, namanje kubhekwa uphawu toffee, 'nambitha "yobuntwana. Empeleni, lokhu akumangalisi ikakhulukazi: ezihlukahlukene enkulu candy uma ningagcini, futhi ohlwini lonke uhla kuyatholakala ngokukhululekile wayengekho amagama eziningi kangaka. Yingakho abanye abantu bazimisele ukwenza toffee ekhaya - basuke eliqhutshwa ezidlule. Yiqiniso, lezi emaswidi akunzima ukuthenga, kodwa ngokuvumelana abantu, kungcono "hhayi ukuthi."
Kodwa abantu abazalwa ngemva kokuwa we silo, ekuhlanganiseni inxenye yesithupha ezweni Imininingwane, ngokuvamile kakhulu "bazitike" Ngokwenza lokhu. Ngesikhathi esifanayo babe izisusa ezahlukene kakhulu. Ngokuvamile ukupheka ngakho abazali ukufunda ngokucophelela indlela yokwakheka candy yesimanje. Akuwona wonke uvume ukondla ingane yakhe cishe isethi egcwele ishadi lesikhathi kanye kwentuthuko kwamakhemikhali organic. amaswidi okuzenzela, abazizwa okuningi iphephe kuwo impilo umzimba sasingakafiki kwakhiwa.
Naphezu kweqiniso lokuthi lezi amaswidi - cishe elula kakhulu ekwakhiweni kanye nokulungiselela, toffee iresiphi (ekhaya uzilungiselele eziningi) izinguquko ekubulaweni ekukhipheni. Futhi njalo umnikazi we wakhe ukholelwa ukuthi indlela yakhe sokulungiselela - ilungelo futhi inika yi ncamashi esifanayo, ukunambitheka esiyingqayizivele.
Cabanga iresiphi esheshayo futhi kulula.
150 g ubisi wafingqa ngizoya 50 g le-bhotela, isipuni kafulawa, 100 g ubisi (ome ngokucophelela!) Futhi 50 - amanzi.
Amafutha kancane liyancibilika kuso ngenkathi sibhebhezela ufulawa konke ndawonye ethosiwe kuya nsundu enhle segolide. Seziqalile Ubisi olujiyile, zonke okuxubile okuphekiwe (babonisa imizuzu 10, futhi phakathi naleso elishukumisayo baqhubeka).
Ubisi buhlanjululwe ngamanzi kuvuna futhi batheleka inhlanganisela. Ukuvusa abayeki! Lapho ikusasa candy ngeke ukushwaqa (kuthatha cishe imizuzu engu-amathathu), shift zabo ku formochkam (Ukufakwa eqhuma candy amabhokisi) noma flat phezu flat. Top kuyodingeka yezinga. Ukuze-ke toffee ekhaya babe kulula ukusika (ikhefu), ungakwazi ukudweba iphutha line. It uhlala ukulinda aze kudambe.
AmaNgisi nguqulo ye okukhona Soviet
Mhlawumbe, e ukhohliwe "Ketha" akekho ngabe ukholelwa ukuthi uma ngimtshela ukuthi Europe uthanda amaswidi. Nokho, kuyiqiniso! esifanayo British uyaziqhenya futhi prim kukhona toffee uzimisele ekhaya, Nokho, futhi babe nemibono yabo ngalokho okufanele kufakwe Ukwakheka kwabo. Ukuze izinhlobo British yalezi amaswidi uzodinga: ibhotela ezinhle 230g (unsalted bese ubheka inketho noma bone ukunambitheka wonke); 250 g ushukela (ungathatha abajwayelekile, kodwa British belulekwa luyimbudumbudu); corn isiraphu - ukukhanya, kuphela isipuni, kodwa yayiyilungele ukuthola; futhi mayelana 90 amagremu alimondi - lapho kungaba ukunambitha yakho - yini noma cha amantongomane okugazingiwe ekufanele.
Indlela ibe njengokuphela British
Uma silandela iresiphi British, ukupheka lesikwele se ikhaya iqala nge ukuxuba ushukela, isiraphu, usawoti namafutha. Ingxube yafakwa umlilo - hhayi eliqinile, kodwa hhayi ngokulambisa yefilakisi. Ubilise imizuzu emihlanu kuya nalutho (ezine, uma ulandela ngokucophelela izincomo abakhileyo Albion). Ukwakheka uqweqwe of nati oqoshiwe yethulwe, okwathi ngemva kwalokho bonke ukwenziwa imizuzu eyisikhombisa (noma kuze kuba sinombala). Wathela phezu ucwecwe ezinamafutha akahle ngommese futhi ungqimba okuholela is nombala basakaza ebusweni. Ngemva solidification uqalisa izingcezu ubukhulu oyifunayo.
Futhi Scots uyabathanda futhi!
Omakhelwane eliseduze kukhona British ujabule kakhulu uma izama ukuzilungiselela toffee ekhaya. Futhi cabanga indlela efanele kakhulu. Ufuna ukujoyina Scotland ongaqondakali - ukusizakala iseluleko sabo. Umehluko wemisindo nemiqondo yamagama zimi kanje: 390 g ushukela kuyadingeka nonsundu, uwoyela - 120 amagremu, 2 nezinkezo amanzi amaningi kanye uviniga, nje kancane usawoti 170 amagremu Molasses. Ukuze uthole ncamashi Scottish toffee candy ekhaya, zonke izithako yilezi okuxubile futhi abilisiwe kuze ushukela siphela. Iningi labo esetshenziswa leresiphi, uvumelana lokuthi abilayo akufanele kube kancane futhi enamandla - lawa izici brown sugar. Into uye wanamathela ezindongeni, kubalulekile ukususa. Uma ungenalo ukuthatha kushukela. Ngokungafani nezinye izindlela mass kuthululwe nge okwalandela yokululama izingqimba futhi ngokucophelela aconsa ungene isikhumba noma ucwecwe, ukuthola uswidi tabobunjwa (kodwana okuqakathekileko Iconsi).
Kulabo ukugwema ushukela
Akumangazi-ke ukuthi ibizwa ngokuthi ukufa emhlophe. Okungenani, lokhu kuyiqiniso ngoba amazinyo. Esikhathini ubisi olujiyile (uma uhlupho ukufunda ngezithako zawo) ushukela kufakwe. Ngakho uma ufisa ukugwema le isithako engathandeki, kuyodingeka usebenzise iresiphi, kusikiselwa ukuthi uyenza kanjani toffee ngaphandle ushukela. Lapha esikhundleni uju, lapho odokotela bathi, okuyinto kuhle empilweni.
Ngakho Ukugunda inkomishi ukhilimu omuncu, ingilazi uju kancane ibhotela - kuphela gcoba le bhaka noma enye indlela okuzokwenziwa amaswidi kubhakwa. Ukhilimu omuncu akufanele kube kubanda, ngakho-ke kuyodingeka asuswe esiqandisini kusengaphambili. Hlanganisa zonke izithako ngaphandle amafutha. Uma uju akuyona fresh kakhulu futhi ushukela - ke "elicibilikile" endaweni okugeza amanzi. Konke lokhu abilisiwe at ukushisa low nge elishukumisayo njalo. Pheka imizuzu 20-25 kuyadingeka. Kuyadingeka ukuba iphazamise kancane futhi njalo ukugwema izigaxa yavela. Lapho toffee esizayo ngeke sifinyelele okwesikhathi spoon, ingxube is batheleka iziqukathi sokugcina, ezinamafutha akahle. Indishi eqeda inqanyulwa okuthandayo.
Yini ungazange ukwazi ikhaya amathofi
Indlela ukucacisa ukulungela: bephonsa consi indebe nje yamanzi abandayo. "Curled up" - sekuyisikhathi uhlangane.
Variegate mouthfeel kungenziwa wanezela kuya ingxube imbewu, zonke nuts, izithelo ezomisiwe (amabhilikosi omuhle kakhulu futhi plums).
Candies zingagcinwa isikhathi eside kakhulu uma egcina efrijini e yesikhumba, ezinamafutha akahle.
Zama sihlanganise ISIFISO kanye nemikhiqizo yemvelo!
Indlela ukupheka isobho nge iwundlu kharcho
Indlela Pheka Solyanka, amakhowe, inhlanzi
Indlela yokwenza vane sezulu ngezandla zabo kusuka ibhodlela plastic